Romafo 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
8 Enti wɔn a wɔwɔ Kristo Yesu mu no nni afobu biara.+ 2 Na saa honhom+ no mmara+ a ɛma nkwa+ a ɛwɔ Kristo Yesu mu no ama moade mo ho+ afi bɔne ne owu mmara ase.+ 3 Na bere a mmara no antumi anyɛ adwuma anwie,+ esiane ɔhonam a na ama ayɛ mmerɛw+ nti no, Onyankopɔn somaa n’ankasa Ba+ bae te sɛ honam a bɔne aka no+ maa bɔne+ no, de buu bɔne fɔ wɔ honam mu, 4 sɛnea ɛbɛyɛ a Mmara mu asɛm a ɛteɛ no benya mmamu+ wɔ yɛn a yɛnnantew ɔhonam mu, na mmom yɛnantew honhom mu,+ no so. 5 Na wɔn a wɔnam ɔhonam mu no de wɔn adwene si ɔhonam mu+ nneɛma so, na wɔn a wɔnam honhom mu no de wɔn adwene si honhom mu nneɛma so.+ 6 Na adwene a esi honam nneɛma so yɛ owu,+ na adwene a esi honhom nneɛma so+ yɛ nkwa ne asomdwoe; 7 efisɛ adwene a esi honam nneɛma so no yɛ ɔtan+ a wɔtan Onyankopɔn, na ɛnhyɛ Onyankopɔn mmara ase,+ na ɛrentumi nyɛ saa mpo. 8 Enti wɔn a wɔwɔ ɔhonam mu+ no ntumi nsɔ Onyankopɔn ani. 9 Nanso, mo de, munni honam mu, na mmom mote honhom mu,+ sɛ Onyankopɔn honhom te mo mu ampa+ a. Na sɛ obi nni Kristo honhom+ a, saa nipa yi nyɛ ne dea. 10 Nanso sɛ Kristo wɔ mo mu+ a, bɔne nti nipadua no awu ankasa, na trenee nti honhom no wɔ nkwa.+ 11 Na afei sɛ nea onyan Yesu fii awufo mu no honhom te mo mu a, nea onyan Kristo Yesu fii awufo mu+ no bɛma mo nipadua a ewu no nso nkwa;+ ɔnam ne honhom a ɛte mo mu no so. 12 Enti afei, anuanom, ɛnyɛ honam na yɛde no ka na yɛatena ase honam mu;+ 13 na sɛ motena ase honam mu a, mubewu ɔkwan biara so;+ na sɛ mode honhom kum nipadua no nneyɛe+ a, mobɛtena ase. 14 Na wɔn a Onyankopɔn honhom kyerɛ wɔn kwan no, wɔn nyinaa yɛ Onyankopɔn mma.+ 15 Na moannya nkoayɛ honhom a ɛde osuro ba+ bio, na mmom moanya honhom+ a egye yɛn+ yɛ mma, na saa honhom no mu na yɛteɛm sɛ: “Abba,+ Agya!” 16 Honhom+ no ankasa ne yɛn honhom+ di adanse+ sɛ yɛyɛ Onyankopɔn mma.+ 17 Na sɛ yɛyɛ mma de a, yɛyɛ adedifo nso: nokwarem no, yɛyɛ Onyankopɔn adedifo, ne Kristo mfɛfo adedifo,+ nanso gye sɛ yɛne no hu amane+ ansa na wɔahyɛ yɛne no anuonyam.+ 18 Enti mihu sɛ yɛde mprempren amanehunu+ no toto anuonyam+ a wɔrebeyi adi wɔ yɛn mu no ho a, ennu baabiara. 19 Na abɔde+ no de anigyina+ retwɛn Onyankopɔn mma ahoyi denneennen.+ 20 Na wɔde abɔde no ahyɛ adehunu ase+ a ɛnyɛ n’ankasa ne pɛ so, na mmom ɛnam nea ɔde hyɛɛ ase no so, anidaso mu,+ 21 a ɛne sɛ abɔde+ no ankasa nso benya ahofadi+ afi ɔporɔw nkoasom mu akɔ Onyankopɔn mma anuonyam ahofadi mu. 22 Na yenim sɛ abɔde nyinaa kɔ so penepene, na wohu amane besi nnɛ. 23 Ɛnyɛ ɛno nko, na mmom yɛn ankasa a yɛwɔ aba a edi kan+ a ɛne honhom no nso, yiw, yesi apini+ yɛn mu bere a yɛretwɛn denneennen sɛ wobegye yɛn ayɛ mma+ no, gye a wɔnam agyede so begye yɛn afi yɛn nipadua mu no. 24 Na anidaso yi mu na wogyee yɛn nkwa;+ nanso anidaso a wohu nyɛ anidaso, na sɛ obi hu biribi a, obetumi anya mu anidaso? 25 Nanso sɛ yɛn ani da nea yenhu+ so+ a, yɛkɔ so ara de boasetɔ twɛn.+ 26 Saa ara na honhom+ no nso di boa yɛn wɔ yɛn mmerɛwyɛ mu;+ efisɛ nea ehia sɛ yɛbɔ ho mpae sɛnea ɛsɛ sɛ yɛyɛ no, yennim,+ nanso honhom+ no ara srɛ ma yɛn, apini a empue ho. 27 Nanso nea ɔhwehwɛ koma mu+ no te honhom no ase+, efisɛ ɛsrɛ ma akronkronfo sɛnea Onyankopɔn pɛ.+ 28 Na yenim sɛ Onyankopɔn ma ne nnwuma+ nyinaa bom di boa wɔn a wɔdɔ Onyankopɔn, wɔn a wɔafrɛ wɔn sɛnea n’atirimpɔw te+ no; 29 efisɛ wɔn a odii kan gyee wɔn toom+ no, ɔhyɛ too hɔ+ nso sɛ wɔbɛyɛ ne Ba no sɛso,+ na wayɛ anuanom+ pii mu abakan.+ 30 Bio nso wɔn a ɔhyɛɛ nea wɔbɛyɛ too hɔ+ no, wɔn nso na ɔfrɛɛ wɔn;+ na wɔn a ɔfrɛɛ wɔn no, wɔn nso na obuu wɔn bem.+ Awiei koraa no, wɔn a obuu wɔn bem no, wɔn nso na ɔhyɛɛ wɔn anuonyam.+ 31 Ɛnde dɛn na yɛbɛka wɔ eyinom ho? Sɛ Onyankopɔn wɔ yɛn afa a, hena na obetumi ne yɛn adi asi?+ 32 Ɔno a wankame n’ankasa ne Ba+ mpo, na mmom yɛn nyinaa nti ɔde no mae+ no, ɛbɛyɛ dɛn na ɔremfa nneɛma foforo nyinaa nso nka ne ho nnom yɛn?+ 33 Hena na ɔbɛtoto wɔn a Onyankopɔn apaw wɔn no ano?+ Onyankopɔn ne Nea obu wɔn bem.+ 34 Hena ne nea obebu fɔ? Kristo Yesu ne nea owui, anaa nea wɔanyan no afi awufo mu mpo, a ɔte Onyankopɔn nifa,+ na ɔsrɛ ma yɛn+ nso. 35 Hena na ɔbɛtew yɛn afi Kristo dɔ ho?+ Ahohia anaa ahometew anaa ɔtaa anaa ɔkɔm anaa adagyaw anaa asiane anaa nkrante?+ 36 Sɛnea wɔakyerɛw sɛ: “Wo nti wokum yɛn daa nyinaa, na wobu yɛn sɛ nguan a wɔrekokum wɔn.”+ 37 Nanso, eyinom nyinaa mu na yɛnam nea ɔdɔɔ yɛn no so di nkonim+ korakora. 38 Na migye di yiye sɛ owu anaa nkwa+ anaa abɔfo+ anaa nniso+ anaa nneɛma a ɛwɔ hɔ anaa nneɛma a ɛrebɛba anaa tumi+ 39 anaa nea ɛwɔ soro anaa nea ɛwɔ fam anaa abɔde foforo biara rentumi ntew yɛn mfi Onyankopɔn dɔ a ɛwɔ yɛn Awurade Kristo Yesu mu no ho.+